🥇 Kaonty momba ny fanaterana sakafo
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 49
Lahatsary momba ny kaonty momba ny fanaterana sakafo
Manafatra kaonty momba ny fanaterana sakafo
Ny fampivoarana ny orinasan'ny orinasa mpanatitra sakafo sy rano dia mifototra amin'ny fahombiazana sy ny automatique ny fizotran'ny asa rehetra. Ny serivisy iraka dia mila mandrindra ny hetsika ataon'izy ireo amin'ny fanatanterahana asa mazava sy mirindra tsara ary fanamafisana ny tombotsoan'ny fifaninanana eo amin'ny tsena. Arakaraka ny hafainganam-pandehan'ny sakafo sy ny rano no hanaterana tsikera sy fanaraha-maso tsara kokoa ho azon'ny orinasa. Noho izany, ny kaonty amin'ny fanaterana sakafo dia mitaky ny fampiasana rindrambaiko izay hampitombo ny fahombiazan'ny fanodinana sy ny fampiharana ny baiko ary, araka izany, ny habetsaky ny tombony. Ny vahaolana tsara indrindra amin'ity olana ity dia ny fividianana ny programa Universal Accounting System, novolavolaina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny orinasa iraka. Ny rindrambaiko atolotray dia afaka manolo mora foana ny rindranasa hafa ary mamela anao handamina ny sehatry ny asa rehetra amin'ny fomba mahomby indrindra. Ny mpiasan'ny serivisy fanaterana anao dia tsy vitan'ny hoe manangana baiko sy manara-maso ny famonoana azy ireo, fa mitazona ny firaketana ny mpiasa sy ny kaonty, mamorona antontan-taratasy, manavao ny angon-drakitra, manamboatra tatitra momba ny fanadihadiana sy ny maro hafa.
Ny firafitry ny rindrambaiko USU dia mizara ho bloc telo ho an'ny vahaolana misesy amin'ny asa maromaro. Ny fizarana References dia ilaina mba hamoronana loharanom-baovao manerantany: ny mpampiasa programa dia miditra amin'ny serivisy isan-karazany, lalana, zavatra momba ny kaonty, entana sy fitaovana, fampahalalana momba ny sampana sy ny mpiasa. Ny fahafahan'ny firafitry ny rafitra dia ahafahanao miasa amin'ny sokajy sakafo sy rano rehetra, mba hahafahanao manitatra tsy tapaka ny isan-karazany. Ankoatra izany, rehefa nohavaozina ny angon-drakitra, ny mpiasanao dia afaka manavao ny fahazoan-dàlana, mba hahafahanao manara-maso ny fandefasana rano, fitaovana mifandraika ary entana rehetra. Ao amin'ny fizarana Modules, ny faritra rehetra amin'ny hetsika dia mitantana: eto ianao manoratra baiko fandefasana, mamaritra ny masontsivana ilaina rehetra, kajy ny vidiny ary miteraka vidiny amin'ny fomba mandeha ho azy. Ny mpampiasa dia afaka mampiditra an-tànana ny entana rehetra ho entana fanaterana. Aorian'ny fanodinana ny angon-drakitra, ny rafitra dia mamorona endrika fandraisana sy taratasin'ny fandefasana miaraka amin'ny asa famenoana ho azy ireo saha amin'ny famoahana azy ireo amin'ny iraka. Ny fanaterana ny fanaterana sakafo tsirairay dia arahina amin'ny alàlan'ny sata sy marika miloko manokana, izay manamora ny fizotran'ny fanaraha-maso ny serivisy maro atao miaraka. Ny rafitra dia mirakitra ny fisian'ny fandoavana ny sakafo sy ny rano aterina mba hifehezana ny fandraisana ny vola amin'ny volavolan-dalàna. Ny fizarana Reports dia takiana hamakafaka ny vokatra ara-bola amin'ny serivisy iraka. Azonao atao, tsy misy fandaniana lehibe amin'ny fotoana fiasana, misintona tatitra ara-bola sy fitantanana mandritra ny fe-potoana voafaritra mba handinihana ny dinamika sy ny firafitry ny tondro ny hetsika ara-bola sy ara-toekarena ao amin'ny orinasa: fidiram-bola, fandaniana, tombom-barotra ary tombom-barotra. Ny fampahalalana mahaliana dia haseho mazava tsara amin'ny diagram, grafika ary tabilao misy rafitra, ary noho ny automatique ny kajy, dia tsy mila misalasala ny fahamarinan'ny angon-drakitra ampiasaina hanombanana ny toe-bolan'ny fikambanana ianao.
Ho fanampin'izay, ny rafi-kaonty fanaterana sakafo novolavolainay dia manana fiasa hanao fanaraha-maso ny mpiasa, hampivelatra fifandraisana amin'ny mpanjifa ary hanao hetsika fanatobiana entana. Noho izany, ny rindrambaiko USU dia manampy amin'ny fanatsarana ireo dingana isan-karazany mba hanamafisana tsara ny toerana eo amin'ny tsenan'ny serivisy iraka tena mifaninana!
Ny fandaharan'asa USU dia manome serivisy mora toy ny fampahafantarana ny mpanjifa momba ny toeran'ny baiko iray, ary koa ny fandefasana fampahafantarana momba ny fihenam-bidy sy ny hetsika hafa.
Azonao atao ny mijery ny hetsika famenoana ny fototry ny mpanjifa, ary koa ny mijery ny anton'ny fandavana ny serivisy atolotra.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rafitra informatika, dia afaka mitahiry firaketana momba ny serivisy iraka ianao, ao anatin'izany ny mpanjifa lehibe - ohatra, ny famatsiana rano ho an'ny birao sy ivon-toeram-piasana.
Ny mpampiasa dia afaka miasa amin'ny rakitra isan-karazany, manafatra sy manondrana fampahalalana amin'ny endrika MS Excel sy MS Word, mametraka ny drafitrasa rehetra.
Ny mpiasanao dia hanana fahafahana hamorona haingana ireo antontan-taratasy ilaina sy ny fanontana manaraka azy amin'ny lohan-taratasy ofisialin'ny orinasa miaraka amin'ny fametrahana mandeha ho azy ny fepetra takiana.
Raha ilaina dia azonao atao ny misintona tatitra momba ny entana rehetra naterina amin'ny tontolon'ny iraka mba hanombanana ny fahombiazan'ny mpiasa sy ny hafainganana.
Ny fanamafisam-peo rindrambaiko dia azo amboarina araka ny toetra sy ny fepetra takian'ny fikambananao manokana, manome vahaolana manokana amin'ny olana misy.
Ny mpitantana ny orinasa dia hanana fahafahana hifehy ny fanatontosan'ny mpiasa ny andraikiny ary hamakafaka ny fahombiazan'ny famahana ny asa nomena mba hifehezana ny kalitaon'ny serivisy ary hamolavola fepetra hanentanana sy hanomezana valisoa ny mpiasa.
Mba hampiharana ny paikady ara-barotra, dia homena fahafahana hanombantombana ny fahombiazan'ny karazana dokam-barotra isan-karazany amin'ny resaka fisarihana mpanjifa.
Azonao atao ny mampitaha ny isan'ny antso voaray, ny fampahatsiahivana natao ary ny habetsaky ny asa tena vita mba hanombanana ny mety sy ny anjara tsena.
Ny famakafakana ny vidiny sy ny fanombanana ny maha-mety azy ireo dia hamantatra sy hanilihana ny fandaniana tsy mitombina ary amin'izany dia hanatsara ny firafitry ny fandaniana.
Ny fanombanana ny herin'ny fividianana mpanjifa dia afaka manampy anao hamokatra tombam-bidy mahaliana ho an'ny mpanjifanao ary hanatsara ny tombotsoanao amin'ny fifaninanana.
Ny fanehoana an-tsary ny angon-drakitra momba ny rafitra sy ny fihetsehan'ny tondro ara-bola dia manampy amin'ny fitantanam-pitantanana mahomby sy ny fanaraha-maso ny fanarahana ny soatoavina tena izy amin'ireo nomanina.
Ny fitantanana ny orinasa dia tsy ho afaka amin'ny fehezin'ny fampiharana ny drafitry ny fandraharahana, fa koa amin'ny vinavina ny toe-bolan'ny orinasa amin'ny ho avy.
Raha ilaina, dia azo atao ny fanohanana ara-teknika ny manam-pahaizana manokana, tanterahina lavitra.